Excavator Manufacturers - China Excavator Factory & Suppliers
ME150.9 shandong yakachipa yakachipa yakawanda inoshandiswa yekuchera ine mahara emahara
Iyo yekuchera yakashongedzerwa nerabha track, yakavimbika uye yemushandisi-inoshamwaridzika.
Iine akawanda mabasa ekuchera, kubata, kuchera, kudonhedza nzombe, kuchenesa gomba uye kuputsa dombo, chekuchera ichi chinogona kushandiswa zvakanyanya mumapurojekiti akasiyana ekuvaka akadai sekupa mvura, magetsi, gasi rekupa, telecommunication network, mapurazi uye mabasa egadheni. nezvimwewo.
Hydraulic Excavators yakati siyanei nemimwe michina yekuvaka mukuti mafambiro ese uye mabasa emuchina anoitwa kuburikidza nekufambiswa kwe hydraulic fluid.Iro compact excavator's work group uye blade zvinoitwa ne hydraulic fluid inobata pama hydraulic cylinders.Iyo yekuchera yakauraya (kutenderera) uye mafambiro ekufambisa anogadziriswawo ne hydraulic fluid powering hydraulic motors.
SITC MR45 Crawler hydraulic rotary drilling rig iri kutengeswa
1.OEM sevhisi inowanikwa kune yedu Rotary Drilling Rig.
2.Custom uye yakakosha dhizaini inowanikwa kune yedu Rotary Drilling Rig.
3.Discount uye mutengo wekusimudzira unowanikwa kune yedu Rotary Drilling Rig.
4.Kurumidza-kupfeka chikamu chinowanikwa kune yedu Rotary Drill Rig.
5.Technology tsigiro inowanikwa kune yedu Rotary Drill Rig.
6.Injini ine mukurumbira kubva kunze ndeye avalibale yeRotary Drill Rig yedu.
HE60 inonyanya kufarirwa diki saizi 6 ton hydraulic excavator mumusika weChinese.Inoshandiswa zvakanyanya kubindu, kuvakwa kwemadhorobha, fekitori yezvidhina uye purazi etc. HE60 excavator ine basa rakanaka kwazvo uye rakavimbika mushure memakore gumi ruzivo.Iye zvino modhi iyi iri kuendesa kunze kuSouth America, Southeast Asia, North Africa, Middle East misika.Uye isu tinotumirawo zvimwe kumisika yeEurope.
ME205.9 Mutengo Wakanaka Wekuchera Kuvaka Digger Inotengeswa
Chizvarwa chitsva-chidiki-diki-chipfupi-tailexcavator chinochinjika, chinoshanda, chakavimbika uye chinogara.Injini inobuda inosangana neEuropean V Standard uye inochengetedza simba uye inodzivirira nharaunda.Iyo itsva-yechizvarwa hydraulic components inonyanya kushanda uye yakavimbika, uye ine yakakwirira yekutonga kurongeka, yakasimba yekuchera simba, uye yakanakisa mashandiro ekushanda.Iyo yakasarudzika mutoro wega-adaptive control tekinoroji inovimbisa kuti injini inoshandisa zvizere donhwe rega remafuta.Mamwe maturusi anopihwa kuti asangane nezvinodiwa zveakanyanya kuomarara mamiriro ekushanda uye kuzadzisa chinangwa chemabasa akawanda mumuchina mumwe.
Yakachipa Chinese shantui Yakakura-saizi digger ME360.8 yemagetsi excavator
Iyo hydraulic crawler excavator ine yakavimbika Cumins injini.
Iyo inouya neyakavimbika hydraulic system inosanganisira yepamusoro-mhando pombi, mota uye mavharuvhu.
Iyo hydraulic excavator yakagadzirwa nemagetsi ekutarisa uye control system ine multifunctional LCD kuratidza basa.
Nechishandiso chakasimudzwa, chinoshanda kumigodhi.
Yakasimbiswa X-yakaita bhokisi chimiro
1.Kuwedzera simba rinoshanda uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredzaAdopt rudzi rutsva rwekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza iro rine maitiro ekuderera, torque yakakura, kushandiswa kwemafuta mashoma, kushanda kwepamusoro, kuvimbika uye kusimba.Gamuchira hombe yekutamisa pombi ine hombe yakaderera uye yakakwira-inomira kukosha, iyo inogona kuvimbisa kuti muchina unoshanda zvakanaka uye nekuchera kwakanyanya.
2. Yakanyanya kuvimbika uye yakasimbaOptimize dhizaini yebhoom uye ruoko uye wedzera kusimbisa nzvimbo dzakakosha kuti dziite kuti dziwedzere kupfeka dzinopesana uye dzakachengeteka.Mazino ebhakiti akaiswa nepini yemuchinjikwa, iyo inogona kudzivirira zvakasimba sleeve yemazino kubva pakudonha uye nokudaro inogona kuvandudza hupenyu hwebasa.
3. Yakanyanya kugadzikana uye yakachengeteka Humanized dhizaini dhizaini, ese ekudzora zvikamu mukati mecab akarongwa nesainzi uye zvine musoro maererano neergonomics theory.Cup inobata, simba rekumira, bhegi remagazini, bhokisi rekuchengetera uye zvimwe zvigadziriso zvemunhu zvinowedzerwa kuvandudza iko kurerukirwa uye kunyaradza kwekushanda zvakanyanya.